China nhare mbozha nhumbi bhegi fekitari uye vagadziri | Hong Bang
Iyo simuka ziplock bhegi ndiyo inonyanya kufarirwa nzira yekutakura yemusika nekuti iyi fomu yekupakata inochinjika uye inoshanda pamwe nekuyevedza. Seizvo zita pacharo rinoratidza, aya mabhegi anokwanisa kumira munzvimbo dzese dzakaomarara. Iyo ine yakakura shefu yekuratidzira kugona uye ivo vanogona kudzora ekuchengetedza zvinodiwa uye nekuwedzera shefu nzvimbo. Kazhinji, bhegi rekumira rinonyanya kushandiswa pane chikafu, zvinwiwa, zvishongo, tii kana kofi, Chikafu chembwa, Chikafu chechipfuwo, uye nhumbi dzekupakata.
Zvivakwa zveiyo Ziplock bhegi
Chikafu chePetro Simuka Homwe inogadzirwa kubva pamatanho akati wandei ezvipingamupinyi zvinhu zvinogona kuiswa mumapoka matatu makuru, anouya pamwechete kupa homwe yacho hunhu uye husinga pinde hunhu. Aya mapoka matatu ndeaya:
Kuchengetedza uye mhando yepamusoro chichava chirevo chedu chekutanga. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nechikafu chegiredhi zvinhu zvinoreva kuti iyo firimu yatinoshandisa, inki uye mutsara wekugadzira ndeye 100% chengetedzo kune wese mukuru kunyange mwana. Kupfuurirazve, isu tiri vakasimba nehunhu zvinoreva zero zero shiviriro yechero nzira yekukanganisa inoratidza pane yakasimba kuvaka, kumesa mweya uye kudhinda kwakajeka. Kavha isina kusimba uye yakakwana mechi nevatengi kudiwa ichagara iri yedu chinangwa.
Chidimbu cheSimuka Up Ziplock Bag
Chiedza Kurema Uye Kubatika
Hapana Mutserendende Mutambo Zviri Nyore Kumira
Bpa, tungamira, PVC, phthalate-yemahara
Pashure: Chikafu chechipfuwo
Zvadaro: Spout pouches